Miaraka amin'ny Affinity Publisher dia afaka mifanakalo eo anelanelan'ny Photo sy Design ianao amin'ny tsindry iray | Famoronana an-tserasera
Affinity Publisher dia natomboka ary tamin'ny hetsika mivantana Serif dia nanambara fampiasa vaovao vaovao: ny mpampiasa rehetra dia afaka mifamadika eo amin'ny Designer, Photo ary Publisher mba hidirana mivantana amin'ny katalaogin'ny fitaovana rehetra isaky ny fampiharana.
Raha te hahafantatra ny fomba fiasa ianao, mandrosoa hitsena ny wit any aoriana amin'ity fanambarana ity izay azo antoka fa hitondra rambony; Tsy dia mahazatra loatra ny fanarahan'ny Adobe amin'ny fanavaozana vaovao.
Serif dia nandefa ny fampiharana Affinity Publisher miaraka amin'i tolotra manokana 20% mba hahafahanao manamboatra azy amin'ny € 43,99 rehefa ho an'ny € 54,99 rehefa lany ny tolotra.
Ny zava-dehibe sy mahaliana momba ny fandefasana dia ny fanambarana fa raha manana ny fampiharana Serif hafa ianao, toa ny Affinity Photo na Affinity Designer (izay nahazo fanavaozana lehibe vao tsy ela akory izay), azonao atao ny mamoha ny haitao an'ny Studio Link an'ny Publisher.
Rehefa tsindrio eo anelanelan'ny sary masina telo samihafa izay ho hitanao eo ambony Avy amin'ny interface, azonao atao ny miditra amin'ny lisitr'ireo fitaovana fanovana vector sy sary avy amin'ny Affinity Publisher.
Izany hoe, sambany tao anaty programa famolavolana endrika, mpamorona afaka mifanakalo eo anelanelan'ny asa fanovana sy famoahana ianao avy amin'ilay fandaharana iray ihany. Toy ny hoe afaka mandeha avy amin'ny Adobe Photoshop mankany amin'ny Illustrator ianao amin'ny tsindry tokana ary avy eo dia mandeha amin'ny lahasa iray mankany amin'ny iray hafa arakaraka ny filanao ary amin'ny hafainganam-pandehany rehetra izay dikany.
Inona no mampieritreritra antsika raha ity tetikady ity dia azo heverina fa manintona mpamorona maro fa hitan'izy ireo ho toy ny valiny nandrasan'izy ireo nandritra ny fotoana ela ny fandaharana Affinity; Indrindra satria amin'ny karama tokana dia manana safidy mahomby telo hafa ianao raha ampitahaina amin'ny an'i Adobe.
Ho hitantsika raha afaka mamaly haingana ireo andiana programa izay mety hanamarika a mialoha sy aorinan'ny fahaizany miteny i Adobe fandehanan'ny asa eo amin'ny Affinity Publisher, Sary sy Mpamorona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Affinity Publisher dia afaka manamarika ny mialoha sy aorian'ny ho an'ny mpamorona